Advanced Amonia Refrigeration Condensation Technology na-enyere aka ịchekwa ume na mmiri oriri site na ihe karịrị 30%. Evaporative Jụrụ pụtara naOZI OZI OGUGU OWU enwere ike inweta. A na-amịpụta Sensible na Latent Okpomọkụ sitere na friji site na mmiri Spray na ikuku ikuku n'elu eriri igwe.
Emechiri Lopo jụrụ oyi
Zọpụta ihe karịrị 30% mmiri na ọnụahịa arụmọrụ ya na sistemụ arụmọrụ dị elu ma rụọ ọrụ nke ọma. Ọ na-anọchi ot intermediate okpomọkụ Exchanger, abụọ mgbapụta, piping & Open ụdị jụrụ ụlọ elu n'ime otu Unit. Nke a na - enyere aka idobe sistemu ahụ ọcha ma dozie ya.
AKW THKWỌ AKWERKWỌ AKW .KWỌ
Ice Thermal ike nchekwa (TES) bụ teknụzụ na-echekwa ume ọkụ site na ịjụ ihe nchekwa nchekwa ka e wee nwee ike iji ike echekwara n'oge ọzọ maka ngwa jụrụ.
AIO Refrigeration Sistemụ Evaporative Condenser
AHEFREF AKW AR A AIO NA-AKW WITHKWỌ AKWAPKWỌ
Skid Mounted Complete Packaged Refrigeration System with Evaporative Condenser na-enyere ndị Ahịa aka ịchekwa Ohere, Ike na Mmiri ihe karịrị 30%. Low n'Aka Amonia Refrigeration Sistemụ nwere otu isi ọrụ, na-enyere aka. A na-amịpụta Sensible na Latent Okpomọkụ sitere na friji site na mmiri Spray na ikuku ikuku n'elu eriri igwe
Refrigeration Auxillary arịa
A na-emepụta ụgbọ mmiri SPL Refrigeration dị ka ASME Sec VIII Div. 1. ASME Stamped arịa emesi ngụkọta pụrụ ịdabere na nkwado na Refrigeration osisi. Ọ bụghị naanị na ọ na - eme ka arụmọrụ nke sistemụ dịkwuo mma, kamakwa ọ na-ebelata ụgwọ ọrụ.
Mepee Steeldị Igwe Na-eme Ka Mmiri Ghaa - Cross Flow
Mepee Edị ígwè jụrụ TOWER
Highdị Open dị elu nke na-arụ ọrụ nke ọma na-azọpụta ihe karịrị 30% mmiri na ọnụ ahịa arụmọrụ megide ụdị agba mgbapụta mepere emepe. Elu arụmọrụ Okpomọkụ nyefe ihe jupụtara n'ime ya na onye na-ekpochapụ ya na-enye arụmọrụ arụmọrụ nke ọma. Kọmpat Ọdịdị na mfe iji wụnye ígwè igwe na-echebekwa gburugburu ebe obibi megide nsogbu FRP.
Advanced Amonia Refrigeration Condensation Technology na-enyere aka ịchekwa ume na mmiri oriri site na ihe karịrị 30%. Evaporative Cooling pụtara na enwere ike ịnweta okpomọkụ ọkụ ala. A na-amịpụta Sensible na Latent Okpomọkụ sitere na friji site na mmiri Spray na ikuku ikuku n'elu eriri igwe.